Heroes & Generals- kuyinto yabadlali abaningi lokuqala umuntu Bhalobhasha kusukela inkampani Reto-moto. Isihloko umdlalo The Second neMpi Yezwe okwakhethwa. Le phrojekthi wabona ukukhanya ngo-2014. Kulesi sihloko uzofunda yonke imininingwane mayelana Heroes & okuvamile. Uhlolojikelele Gameplay, nezidingo zomshini, bheka ngezansi.
Game Heroes & okuvamile kuqala zagcwala ngo-2011. Alpha version of the isikhathi wabheka kuhle kabi futhi wenza akukho umxhwele umphakathi amageyimu. Ngemva kwalesi simemezelo Onjiniyela cishe akabonisanga project yakhe kuze kube Usuku lokukhishwa. Julayi 11, 2014 Heroes project & okuvamile, nezidingo zomshini ezisohlwini lesi sihloko, waqhubeka ukudayiswa kwi Steam esitolo. Kancane kancane, umdlalo aqala ukulinqoba ezinhliziyweni zabantu. Ngo-2015, lapho engena phezulu ethandwa kakhulu amaphrojekthi yabadlali abaningi, futhi ngo-2016 inani abadlali ifinyelele abayizigidi ezingu-7 abantu. Ngaphezulu kwempilo we Onjiniyela game njalo ngcono futhi ubuyekeze amaklayenti.
Imuphi umdlalo wama?
Empeleni, lo mdlalo ajwayelekile umyalo Bhalobhasha, lapho-ke enhlangothini zombili empini ngenxa ukuthunjwa noma azibone emkhulu kumephu. In the game kukhona 3 amaqembu: USSR, USA naseJalimane. Ngokungafani nezinye abacibishelayo, lapho une ukuthenga fighters ebuthweni lakhe. iqhawe ngamunye has amakhono abo siqu, nayo akhishwa ngenxa lwemali. Ngo Heroes & Izidingo okuvamile System ongaphakeme ukukhokhela nezithameli omkhulu onjalo. I Onjiniyela uhlela ukwethula usekelo DirectX12, kodwa bashiya umbono ngoba iningi labadlali waqala kuphakama izinkinga nge nokwenza nekhasimende ukuzinza.
Nakuba kunezinkolo izakhi Tactical futhi amasu ka umdlalo, Heroes & okuvamile kuyinto umdlalo isenzo. Umphumela impi kuzoncika hhayi ibhalansi yamandla noma uzotshala kahle, kanye namakhono siqu of umdlali ngamunye.
Heroes & okuvamile: Izidingo uhlelo
Ukuqala umdlalo phezu ubuncane ihluzo izilungiselelo uzodinga ukucushwa elandelayo: 2-core "Intel" noma "AMD" kweyesi-2 GHz, 2 GB we-RAM, ihluzo ikhadi ne-512 MB inkumbulo, futhi 2 kuphela GB yesikhala samahhala ku-hard drive yakho. Futhi sidinga i-operating system engu-"XP windose."
Kwezihlabani & okuvamile Izidingo System ngaphansi izilungiselelo esiphezulu kanje: 4-core processor, 4GB we-RAM, 1 GB imemori kanye 2GB kanzima sediski ukufakwa.
Heroes & okuvamile - ngempela iphrojekthi ezithakazelisayo futhi original. Ephambi kwezinduna ezulu kangaka mayelana mdlalo cishe kungevakali kwa ka kwabezindaba noma kwi-inthanethi. Nakanjani kuyakufanelekela ngizame bonke abathandi sokushona seMpi yoMhlaba yesiBili kanye abalandeli abacibishelayo ezilungile ku-intanethi. Ngaphezu kwalokho, lo mdlalo qotho abanikazi amakhompyutha kancane.
Fashion Amadolobha: Skylines - ukuthi ungasetha kanjani bebodwa?
Heroes Amaqoqo "Dota 2" amabili. amagama namaqhawe "DotA 2"
Hexagon ukufakwa kokumqoka kuphela Sibutsetelo izinhlobo, izicelo kanye nokubuyekeza
Ukulungiswa ezithaka imithi "Baneotsin" (wamafutha)
Awezinyoka: amagama ezilwane ngezithombe
Kosa, izinwele zezinwele eziphakathi noma enye into?
Akhtuba River: incazelo, ukujula, izinga lokushisa lamanzi, izwe isilwane netimphawu nokungcebeleka
Nai Yang Beach Resort 4 *, Nai Yang Beach, incazelo Thailand Ihhotela, ukubuyekezwa